Kaamamyada Gaajada-La'aanta - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-la'aanta
Waxaan aaminsanahay in arday kasta oo kulleej ah uu xaq u leeyahay inuu ka xoroobo gaajada,guri la'aan, iyo dhibaato dhaqaale. Xarumo gaajo-la'aan ah ayaa ah xarumahawaayo-aragnimada ardayda si ay u sameeyaan isbeddelo hubin doona dhammaan ardayda inay helaandhaqaale iyo taageero dhaqaale oo ay u baahan yihiin si ay u gaadhaan riyooyinkooda.
Ardayda kulliyadda waxay u baahan yihiin taageero dheeraad ah. Waxaa jira barnaamijyo baahiyo aasaasi ah oo aan ku filneyn, wacyigelin iyo nidaamyo taageero oo ka jira xarumaha Oregon. Taasi waa sababta aan u keenayno sharci, oo ay weheliyaan Ururka Ardayda Oregon iyo Ururka Kulliyada Bulshada Oregon, kaas oo bilaabaya inuu wax ka qabto baahiyaha ardayda kuleejka.
HB 2835 waxa ay siisaa dariiqooyin ay fursad u helaan ardayda kuleejka ah ee ay la kulmaan gaajo iyo faqri. Waxa ay ka dhistaa faa'iidooyin Navigator mid kasta oo kuliyada bulshada Oregon iyo jaamacada si ay uga taageerto ardayda helida faa'iidooyinka, sida cuntada iyo kaalmada guriyeynta, si ay u daboolaan baahiyahooda muhiimka ah.
Ka qaybgal! Ku biir liiska iimaylkayaga si aad ula socoto fursadaha lagu ogeysiinayo sharci-dejinta Oregon inay ogaadaan muhiimadda ay leedahay taageeridda ardayda kulliyadda.
Tuujista Ardayga Wayn: Kharashaadka Cirka iyo Baahiyaha Aasaasiga ah ee Aan la daboolin ayaa Saamayn ku leh Guusha Ardayga: Saamaynta Oregon
Warbixinta Oregon ee gaajo-la'aanta waxaa qoray Heather E. King, MSW, Ph.D. Musharaxa, Jaamacadda Gobolka Oregon
Cilmi-baadhis cusub oo muujinaysa gaajada ardayda Oregon iyadoo la eegayo cilmi-baadhis heer qaran ah oo tilmaamaysa arrinta baahsan ee saamaynta gaarka ah ku leh ardayda la kulma takoorid, iyo sidoo kale saamaynta ay gaajada ardaydu ku leedahay guusha ardayga. Cilmi-baadhistan ayaa tilmaamaysa talooyinka siyaasadda gobolka iyo machadyada si wax looga qabto baahiyaha ardayda.
Soo Koobid Warbixinta
SIDEE AAN HALKAN ku gaadhnay
Shaqadeena gaajada kulliyadda waxay bilaabatay Janaayo 2018 markii arday ka socda Jaamacadda Oregon uu nala soo xiriiray isagoo codsanaya taageero. Waxaan samaynay xoogaa cilmi-baaris ah, gaarnay ardayda kale iyo xarumaha kulliyadaha, iyo si wadajir ah, oo leh Kooxda Gaajada ee Oregon, waxaanu qabanay Kulan Dhagaysi: Gaajada iyo Haqab-beelka Cunnada ee Xarumaha Kulliyada ee Oregon ee Jaamacadda Oregon.
U doode ahaan, waxaan si dhow ula shaqeynaa Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Oregon si aan u hubinno in qof walba uu heli karo barnaamijyada nafaqeynta federaalka. Bishii Luulyo 2019, Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Oregon dib u turjumay luqadda federaalka ee u-qalmitaanka ardayda kulliyadda Kaas oo u oggolaaday gelitaanka dheefaha SNAP kumannaan arday ah ee kulleejyada Oregon ah. Tan iyo markaas, waxaan la xiriirnay ardayda kulliyadda iyo shaqaalaha gobolka oo dhan si aan u bixinno Bixinta SNAP iyo Tababarka Farsamada xarumaha kulliyadaha. In kasta oo shaqadani ay muhiim noo tahay, haddana aad ayay noogu jirtaa, waxaanan ognahay in siinta macmacaanka cuntada iyo manfacyada SNAP ee ardayda aysan xallin doonin cunno-la'aanta - markaa waxaan abuurnay Ololaha Xeryaha Gaajo-La'aanta.
Ololaha kambasyada gaajo-la'aanta waxa ku jira saddex xeeladood oo aasaasi ah. Xeeladahan waxaan hiigsaneynaa inaan si wadajir ah ugu doodno isbeddelada heerka-gobolka ee soo afjaraya gaajada iyo baahida aasaasiga ah ee ardayda kuleejka Oregon.
Gaarsiinta: Wacyigelinta SNAP, caawimada farsamada, iyo iskuduwidda kulliyadaha bulshada Oregon iyo jaamacadaha dadweynaha
Engagement ardayda iyo daneeyayaasha si ay u horumariyaan xalalka siyaasadda
Advocacy horumarinta siyaasadda ee udub dhexaad u ah waayo-aragnimada ardayda kulliyadda.
Abuuritaanka Xalka SIYAASADDA
Bilihii Janaayo iyo Febraayo 2020, Kooxda Kaamamka Kaamam ee Gaajada-La'aanta ah, oo taageero ka helaya Ururka Ardayda Oregon, waxay sameeyeen goobo dhegeysi oo xiriir ah oo ka dhacay xerada waxayna wadaageen sahan online ah gobolka oo dhan. Waxaan waydiisanay ardayda inay wadaagaan jawaab celin ku saabsan waayo-aragnimadooda ku saabsan socodka cuntada iyo baahiyaha aasaasiga ah ee amni-darrada marka ay dhiganayaan kulliyadda, waxaanan ka codsannay inay nala wadaagaan sida uu u ekaan karo Campus Free Hunger Free. Waxaan ka maqalnay 197 arday jaamacadeed oo ku kala baahsan 11 kulliyadaha dadweynaha iyo jaamacadaha Oregon. Waa tan waxa aan maqalnay:
71% ardaydu waxa ay sheegeen in ay la kulmeen haqab-beel cunto 12-kii bilood ee la soo dhaafay
20% ardayda ayaa loo aqoonsaday inay ku sugan yihiin xaalad amni 12-kii bilood ee la soo dhaafay
Kala doorashada kirada ama cuntada waa shay dhab ah.
Kharashka tagitaanka dugsiga (waxbarashada, buugaagta, iwm), qiimaha guryaha, qiimaha nolosha (biilka, iwm), kharashka daryeelka carruurta, iyo kharashka cuntada oo dhami waxay hortaagan yihiin in lagu guuleysto dugsiga.
"Aniga shaqsi ahaan ma awoodo inaan iibsado raashin sababtoo ah waxaan haystaa kiro, waxbarasho iyo biilal kale oo aan bixiyo." (Jaamacadda Gobolka Portland, jawaab-bixiye sahanka)
"Waa wax culus. Waxa aan shaqo galay oo aan dabada ka garaacay ilaa 1, 2 subaxnimo, waxa aan imaadaa dugsiga 7 subaxnimo. Kaliya waxaan shaqeeyaa si aan u bixiyo cuntadayda oo aan fiicnaado. Marna kuma fiicna. Had iyo jeer waan warwareegaa.” (Lane Community College, ka qaybgalayaasha goobabada dhegeysiga)
Kasbashada nolol maalmeedku waa daal.
Arday badan waa inay shaqeeyaan 20 saacadood ama ka badan todobaadkii si ay u awoodaan inay wax ku bartaan, guriyeen, iyo inay u bixiyaan biilasha.
Ardeyda kulliyadda maanta aad ayey uga duwan yihiin kuwii hore.
Qaar badan oo ka mid ah ardayda kuleejka ee maanta ayaa sidoo kale ah waalid, ama shaqeeya waqti buuxa, oo ay ku mashquulaan masuuliyado badan.
"Inaad noqoto hooyo keligiis ah oo ay gacanta ku hayso laba dhallinyaro ah, dhigata kulliyadda waqti buuxa, iyo shaqaynta wakhtiga dhiman waa culays aad u weyn. Waxaan u halgamaa sidii aan nolol maalmeedka u heli lahaa bil kasta. Dhibaatada jireed ee ku hoos jirta xaddigan cadaadiska ayaa badan. Waxaan sameeyaa $100 [in ka badan xadka] si aan ugu qalmo SNAP. Ma aha in ay tani halgan u badan noqoto sidii loo dabooli lahaa baahiyaheena aasaasiga ah ee bini'aadamka." (Jaamacada Gobolka Portland, jawaab bixiye sahan)
“Xaaladdaydu waa mugdi. Waxaan seexdaa teendho. Waxay ahayd inaan soo dejiyo sharciga magaalada ee naloo oggolaaday inaan ku dhejinno. Waxa ay si dhab ah u odhan karaan 'tani waa indho-beel, waxa aad haysataa 24 saacadood oo aad ku guurto'." (Kulliyada Bulshada Portland, jawaabe)
Nabadgelyo la'aanta guryuhu waxay dhibaato ku tahay ardayda kulliyadaha.
Dhammaan ardayda kuleejku kuma noola guryaha jiifka, ama waalidkood, ama xitaa saqaf madaxooda ma leh.
Calool madhan kuma guulaysan kartid.
"Marka aanan helin nafaqo ku filan jidhkayga, waxay u badan tahay inaan dareemo tamar aan ku galo fasalka. Marka, haddii aan galo fasalka, waxba ma baranayo. Haddii aan guriga joogo, waxa la igu ganaaxayaa in aanan aadin inkasta oo ay natiijadu isku mid tahay.” (Jaamacada Galbeedka Oregon, ka qaybgalayaasha goobabada dhegeysiga)
"Xitaa haddii aad taqaanid goorta ama meesha aad aadi karto, dhammaan waraaqaha iyo sharciyadu waxay noqon karaan kuwo jahawareer iyo culeys badan leh. Adeeg kasta oo kala duwan wuxuu leeyahay shuruudo kala duwan." (Linn-Benton Community College, ka qaybgalayaasha goobabada dhegeysiga)
Ardaydu waxay u baahan yihiin taageero dheeraad ah.
Waxa jira barnaamijyo baahiyo aasaasi ah oo aan ku filnayn, wacyigelin iyo nidaamyo taageero oo ka jira xarumaha.
Waxba anaga ma jirto, la'aanteenna.
Ardeydu waa inay udub dhexaad u noqdaan habka go'aan qaadashada.
"Waxa aan ka rabno maamulayaasha iyo sharci-dajiyayaashu waa inay na maqlaan oo ay na fahmaan oo ay tallaabo qaadaan." (Jaamacadda Western Oregon, ka qaybgalayaasha goobabada dhegeysiga)
Akhri warbixinta wareegtada Dhageysiga
Akhri warbixinteena ku saabsan gaajada ardayda Oregon
Ma doonaysaa inaad wacyigelin ka samayso xeradaada?
Qalabkayaga Kulliyada SNAP waxa uu leeyahay agabka aad u baahan tahay si aad u bilowdo ama u sii wadato wacyigelinta kuleejkaaga.
Nagu Soo Biir Dhamaadka Gaajada
Si wadajir ah, waxaan ku joojin karnaa gaajada Oregon